» मुटुदेखि मुटुसम्म भाग ५ – प्रेम कहिल्यै अन्त्य हुँदैन
१८ असार २०७६, बुधबार १६:२३
भुवन घलान, मकवानपुर, १८ असार । माया,शब्द एक तर अर्थ अनेक । मायाको परिभाषा सबैजनाको आ–आफ्नो अनुभव अनुसार फरक फरक सुन्न सकिन्छ । कसैले आफुले गरेको अनुभवको आधारमा माया संसार हो भन्लान्, कसैले माया सबथोक हो भन्लान्, कसैले माया जीवन हो भन्लान्, त कसैले माया रोदन हो भन्लान् जे भनेपनि आजसम्म मायालाई ठेट रुपमा कसैले परिभाषित गर्न सकेको छैन तर ज–जसले आफ्नो अनुभवको आधारमा आफ्नो तरिकाले परिभाषित गरे गलत पनि पक्कै होइन । फरक यति मात्रै हो कि, आधा पानी भरेर राखिएको गिलासलाई कसैले आधाभरी गिलास भन्लान् त कसैले आधा खाली गिलास, आखिरमा कुरा उही न हो ।
अचेल धेरैको बुझाईमा माया एउटा पसलमा बेच्न राखिएको सुका पैसामा ४ वटा आउने सस्तो चकलेट जस्तै भइसकेको छ, जसले नि सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने । त्यसैले सजिलै पाएको माया सजिलै तोडिने गरेको इतिहासहरु आँखा अगाडि नै थुप्रै छन् । अझ कतिले त मायालाई एक–एक शब्दमा बिभाजन गरेर मा–मानसिक र या–यातना भनेर गलत अर्थमा परिभाषित गरेको पनि पाइन्छ । तर ‘माया’ शब्द आफैँमा पबित्र र मुल्यवान छ । किशोरावस्थामा धेरैले महसुश गर्ने भावना प्रायः माया नभएर एउटा आकर्षण मात्रै हुनसक्छ, जसलाई हामी ‘माया’ नाम दिएर झुक्किरहेका हुन्छौं तर यो सत्य हो कि ‘आकर्षण’ मायाको पहिलो खुड्कीला हो । तर प्रायः सम्बन्धहरु माया हुन नपाउँदै टुंगिने गरेको छ । जसलाई हामी आँफैबाट महसुस गर्न सक्छौं । हामीले माया गरेको भन्ने मान्छेको बारेमा हामी सम्बन्धमा हुँदा थप चर्चा गर्न पछि पर्दैनौं तर त्यही मान्छेसंग सम्बन्ध टुंगेको दिन हिजोको चर्चा गर्दै हिड्ने हामी नै उसलाई तथानाम गाली गर्न र कुरा काट्न आतुर रहन्छौँ । यहिबाट प्रष्ट हुन्छ, हिजोको सम्बन्ध माया थियो या आकर्षण मात्रै । हेर्नुहोस् पुरा भिडियो-
हामीले आफूले मन भित्रै देखि चाहेको मान्छे, माया गरेको मान्छे सधैं आफ्नो नयनको परिसरमा रहिरहोस् र आफ्नै बनाउँन सकूँ भन्ने अधिकांश माया गर्ने मान्छेको चाहाना हुन्छ । मायामा लगाब र झुकाब गरी दुई कुराको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ । दुई पक्षमा यी दुई कुरा बराबर छ भने सम्बन्धले माया नाम पाउन सक्छ र माया भएर सम्बन्ध सफल हुन सक्छ तर एक पक्ष मात्रै कम वा बढी भयो भने सम्बन्ध आकर्षणमा मात्रै सिमित रहन्छ । माया हुन दुबै पक्षबाट लगाव र झुकाव बराबर हुन आवश्यक छ । तर अहिलेको अधिकांश सम्बन्धहरुमा झुकाब भन्दा बढी लगाब पाइन्छ । कसैलाई आफ्नो बनाउन भलै अर्को पक्षले चासो नदेओस् तर कति धेरै लागिपरिरहेका हुन्छौँ । कति धेरै कर गरिरहेका हुन्छौँ । अनि हात काटेर होस् या मर्छु भनेर उसलाई बाध्यतामा पारेर मनमा डेरा बनाएर बस्ने बसाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छौं । तर यो गलत हो यसरी कायम भएको सम्बन्ध क्षणिक चिटिक्क देखिने बालुवाको घर जस्तै हो कतिबेला भत्किन्छ थाहै हुँदैन । किन कि जसरी जस्तो हावाहुरी आधी नै आए नि मजबुत भएर रहन घरलाई जग आवश्यक छ यस्तै सम्बन्ध मजबुत हुन पनि विश्वास आवश्यक छ । मान्नुस कि, सम्बन्ध घर अनि विश्वास जग । रोएर, गिडगिराएर र बाध्यतामा पारेर कायम भएको सम्बन्ध माया हुनै सक्दैन ।
मायामा मात्रै खुशी हेरिन्छ त्यो पनि आफ्नो होइन आफुले माया गरेको मान्छेको । तर हामी माया जस्तो पवित्र नाम दिएर पाप गरिरहेका हुन्छौँ । यतिसम्म कि मर्छु र मार्छु भन्ने धम्की दिएर सम्बन्ध कायम गर्न हामी पछि पर्दैनौँ । हामीले यसरी कसैको भौतिक शरीर प्राप्त त गर्न सक्छौं तर यसरी मन कदापि प्राप्त गर्न सक्दैनौं । अनि मन बिनाको माया कसरी माया ? मायामा नकारात्मक स्वार्थ कत्ति नि हुँदैन । तर यसरी कायम गरेको सम्बन्धमा सतप्रतिशत स्वार्थ देखिन्छ । आफू खुसी हुने स्वार्थ जहाँ हामीले चाहेको मान्छेको खुशीको पर्वाह नै छैन । अनि कसरी भयो माया ? मायामा त आफ्नो मन दुखाएर अरुलाई खुसी बाँडिन्छ । त्यसैले साँच्चै कसैलाई मन देखि नै माया गर्नुहुन्छ भने यो कुरामा ध्यान दिउँ कि उ सम्बन्धमा खुसी छिन् कि छैनन् ? अनि म आफू खुशी भइरहेको सम्बन्धमा उ सन्तुष्ट छ कि छैन ? छ भने सम्बन्ध बढाउनुस् यदि छैन भने उसको खुशीको लागि उसलाई नै त्याग्नुस् अनि महसुश गर्नुस् पाउनुमा भन्दा गुमाउनुमा कत्ति माया हुन्छ भनेर । र उसले पनि तपाईंसँग हुंदा, तपाईले आफ्नो खुशीको लागि उसलाई आफ्नो बनाउन खोज्दा भन्दा पनि उसको खुशीको लागि उसलाई गुमाउँदा महसुश गर्नेछ कि तपाईले कति माया गर्नु हुन्छ भनेर । यदि साँच्चै बुझ्ने नै हुन् भने उ फर्केर तँपाइलाई नै स्विकार्ने छ तर यदि नबुझ्ने रहेछ भने जसको दिल छैन उसको लागि दिल नदुखाउँदा समझदारी हुन्छ । किन कि प्रेमले सबै सहन्छ, यसले केही कुराको आसा गर्दैन, यो धिरजी हुन्छ । किन कि प्रेम कहिले पनि अन्त्य हुँदैन अनि युगौँ युग बाँचिरहन्छ, सृष्टिकर्तादेखि सृष्टिसम्म, अभिभावकदेखि सन्तानसम्म, बफादार श्रीमानदेखि वफादार श्रीमतीसम्म, हरेक सम्बन्धसम्म अनि मुटुदेखि मुटुसम्म ।
मुटुदेखि मुटुसम्म भाग–२